Vaovao - Vita soa aman-tsara ny fandavahana lalana “lavaka tokana, fisintona indroa” voalohany an'i Shina
Vita soa aman-tsara ny fandavahana lalana “lavaka tokana, fisintonana indroa” lavitra voalohany an'i Shina
Tamin'ny 11 Aogositra, fantatry ny mpanoratra avy amin'ny Liaohe Oil Construction First Company Crossing Engineering Company fa ny fihenan'ny zotra Qinghe amin'ny tolo-bidin'ny fahadimy an'ny tetikasa fantsakan-tsolika solika Daqing-Jinxi (seksiona Chuiyang-Tieling) tanterahin'ity orinasa ity dia nahomby, nahomby ny fitomboana maharitra voalohany any Sina. Ny fandefasana torolàlana dia mizotra avy amin'ny "dragona roa-lavaka".
Ny tetikasa fiampitana Qinghe dia miorina eo amin'ny 2 kilometatra avaratry ny Anyemin Village, Yemin Town, Kaiyuan City, faritany Liaoning. Izy io dia asa fananganana ho an'ny fandavahana torolàlana miaraka amin'ny alàlan'ny fantsom-pitrandrahana solika miaraka amin'ny savaivony 813 mm ary tariby tariby optika misy savaivony 114.3 mm.Ny rafitra ara-jeolojika an'ny faritra fananganana dia anjakan'ny vatokely sy vatosoa. Ny fizarana fiampitana fandavahana dia 1625 metatra ny halavany ary an'ny tetik'asa fiampitana renirano lehibe.
Mba hamita ny asa amin'ny fiampitana ny ony araka ny fandaharam-potoana, ny fananganana ny Dajin Pipeline Project Department an'ny No. 1 Fananganana ny renirano Liaohe dia natsangana ara-tsiantifika hanoherana ny hafanana sy hafanana avo. Izy io dia manana olana be dia be toy ny fikorontanana ambony, ny strata malefaka sy mafy tsy mitovy, ary nahavita tamim-pahombiazana ilay asa fitarihana. Tsy nisy fisehoan-javatra momba ny fotaka mandehandeha, izay noderain'ny tompony, ny fanaraha-maso ary ny governemanta eo an-toerana.